स्वास्थ्य Archives | Nepali In Japan
18Feb By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा पढाई, काम या ब्यापार, जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत रहेका भएपनि धेरै नेपालीहरुले गर्ने गरेको एउटा गुनासो कपाल झर्यो भन्ने हुन्छ । पुरुष भन्दा अझ बढि महिलाहरुमा कपाल झर्नु आम समस्या हो । जीवनशैली, तनाव र मानसिक समस्याका कारण पनि कपाल झर्छ । आजको लेखमा जापान आएपश्चात कपाल झर्ने समस्या कसरी उत्पन्न हुन्छ र कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेवारेमा केही आधारभूत जानकारीहरु लेख्ने प्रयासमा छौं । १.तनाव काम, पढाई लगायतका क्रियाकलापहरुका कारण हुने मानशिक थकान र आवश्यकताभन्दा बढि हुने तनावले गर्दा पनि कपाल झर्छ । जापान आएका सुरुवाती समयमा घरपरिवारको याद, नयाँ परिवेश, कामको प्रेसर, पढाईको प्रेसर आदि कुराहरुमा सकेसम्म कम तनाव लिनु फलदायी हुन्छ । निरन्तर जापानमै बसिरहेकाहरुको हकमा पनि आवश्यकता भन्दा बढि लिइने तनाव र नियमित खानपानमा ब्यालेन्स नमिल्दा पनि यो समस्या आउने चिकित्सकहरु बताउँदछन् । २. जलवायु पर...
12Feb By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा गर्भवति जाँच खरिद कहाँ गर्ने भन्नेबारे अन्योलमा पर्नुभएको छ भने तपाइका लागि आजको लेख उपयोगी हुन सक्छ । क्लिनकमै गएर पनि जाँच गराउन सकिन्छ तर जाँचकै लागि मात्र गैरहन जरुरी छैन । जापानमा गर्भ जाँच गर्ने किट खरिद गर्न निकै सरल र सस्तो छ । गर्भ जाँच किट खरिद कहाँ गर्ने ? जापानमा गर्भ जाँच कहाँ गर्ने भन्ने खोज्न किनै सजिलो छ । निन्सिन खेन्सा याकु 妊娠検査薬 (にんしんけんさやく) को नामले ती औषधी पसलहरुमा उपलब्ध हुन्छन् । गर्भ जाँच किट खरिद गर्ने जापानमा रहेका औषधी पसलका चेनहरु निम्न छन्ः – माचुमोतोकियोसी (マツモトキヨシ) – चुरुहा दोराक्कु (ツルハドラッグ) – कोकोकारा फाइन (ココカラファイン) – सानदोराक्कु (サンドラッグ) – कोसमस (コスモス) यदि माथि उल्लिखित औषधी पसलमध्ये कुनै पनि नजिकै छैन भने स्थानीय औषधी पसलमा पनि यो उपलब्ध हुन सक्छ । साथै एमजन र राकुतेनजस्ता अनलाइन बजारबाट पनि गर्भ जाँच सम्बन्धी किट अर्डर गर्न सक...
अधिकांश मानिसमा कपालमा चायाँ पर्ने समस्या आम हो । यदि तपाइ जापानमा एण्टि डयाण्ड्रफ स्याम्पू खोज्दै हुनुहुन्छ भने आजको लेख तपाइका लागि उपयोगी हुन सक्छ । औषधी पसललमा एण्टि डयाण्ड्रफ स्याम्पू फेला पार्नु कठिन कार्य हुन सक्छ । स्टोरका कर्मचारीलाई यसबारे सोधेर वा विभिन्न कपालसम्बन्धी उत्पादनहरु राखिएका एउटा ठूलो र्याकमा आफैं खोज्न सकिन्छ । कपालमा चाया पर्नुका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । यदि तपाइको कपालमा परेको चाया निकै खराब स्तरमा पुगिसकेको छ भने डम्र्याटोलोजिष्टलाई भेट्नु पर्छ । उनले तपाइको समस्याको सहि समाधान निकाल्न सक्छन् । चिकित्सका जाँदा यी शब्द उपयोगी हुन सक्छन् । かゆみ: चिलाउने フケ: चायाँ यदि तपाइ एण्टि ड्याण्ड्रफ स्याम्पुको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पहिले आफने कपालको प्रकारका बारेमा थाहा पाउन आवश्यक छ । १.सुख्खा कपाल कपाल सुख्खा हुनु पनि केही प्रकारका चायाँ पर्नुको मुख्य कारण ह...
केन्कोउ सिन्दान (健康診断) अर्थात स्वास्थ्य जाँच । जापानमा अधिकांशलाई श्रमका लागि तयार भएको सुनिश्चित गर्न नजिकैको क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँचका लागि पठाइन्छ । कर्पोरेट अफिसहरुमा वार्षिक स्वास्थ्य जाँच साधारण कुरा हो र यसमा विदेशीको पनि सहभागिताको अपेक्षा गरिन्छ । तर यो सबै तपाइको रोजगारदातामा निर्भर हुने कुरा पनि हुन् । सबै कम्पनीहरुले नियमित स्वास्थ्य जाँच नगराउन पनि सक्छन् । यस्तोमा आफ्नै खर्चमा गर्न पनि सकिन्छ । स्वास्थ्य जाँच प्रकृया सामान्य प्रक्रिया भएपनि जापानी भाषा नआउनेका लागि भने यो केही कठिन भने हुन सक्छ । विशेषगरि रिपोर्ट के आयो, के कुरामा ध्यान दिने भन्नेजस्ता कुरा डाक्टरले भनेका आधारमा बुझिएन भने सही निर्देशन पालना गर्न सकिंदैन, यस्तोमा कोही साथीको सहयोग लिन सकिन्छ वा आफुलाई जापानी त्यति नआउने भएकाले सरल तरिकाले बुझाउन वा अंग्रेजीमा बताउनका लागि अनुरोध सम्म भने गर्न सक्नुपर्छ । ...
19Mar By NIJ AdminNo Comments
जापानले गत महिनादेखि पहिलो चरणको कोरोना भाइरस विरोधी खोप कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले जापानमा खोप लगाउँदा के के हुन सक्छ र खोपको टिकट पाएपछि खोप लगाइने प्रक्रियाबारे बताउन गइरहेका छौं । खोप कसले पाउँछ ? - सरकारले जापानका सबै बासिन्दाहरुलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनेछ । यसमा विदेशी बासिन्दाहरु समेत १६ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका सबै पर्नेछन् । - खोप बाध्यकारी छैन । खोप नलगाउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि छैन । तर योग्य सबै बासिन्दालाई खोप लगाउन अनुरोध गरिनेछ । - तपाईलाई ज्वरो आएको छ, वा कुनै गम्भीर रोग लागेको छ वा खोप लगाउँदा गम्भीर खालको एलर्जी भएको इतिहास छ भने खोप लगाउन दिइदैन । - स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरुसँगको सल्लाहमा गर्भवती महिलाहरु पनि खोप लगाउन योग्य छन् । तर यसका लागि स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरुसँग परामर्श लिनुपर्नेछ । पहिलो त्रैमसमा भने गर्भवतिलाई खोप नलगा...
27Feb By NIJ AdminNo Comments
पछिल्लो समय जापानमा मेडिकल पयर्टनको विस्तार भइरहेको छ । उन्नत औषधि उपचारका लागि यहाँ विदेशीहरु आउने क्रम बढेसँगै सरकारले सन् २०११ मा ‘मेडिकल स्टे भिसा’ ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाले गर्दा भिसा नवीकरण नगरिकन लामो अवधि औषधिउपचारका लागि बस्न सजिलो भएको छ । मेडिकल स्टे भिसाले विविध रेञ्जका औषधि उपचार लिने अनुमति दिन्छ । यसमा मेडिकल इन्ष्टिच्यूटमा मात्र उपलब्ध मेडिकल उपचार मात्रै होइन मेडिकल चेक–अप, दन्त उपचार पनि गर्न मिल्छ । बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थाले निर्देशन दिएको छ भने स्पामा आरोग्यलाभ लिन पनि सकिन्छ । यो भिसाको अवधि ६ महिनासम्मको हुन्छ । यसको निर्धारण बिरामीको अवस्थाअनुसार गरिन्छ । ९० दिन भन्दा बढी बस्नु पर्छ भनेर बताइएको छ भने अस्पतालमा भर्ना हुनै पर्छ । यो भिसाको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया भने ९० दिन बस्ने हो कि त्यो भन्दा धेरै त्यसमा भर पर्दछ । बिरामीको साथमा हेरचाह गर्ने अर्को व्यक्ति...
6Feb By NIJ AdminNo Comments
अस्पताल जान पक्कै पनि रमाइलो हुन्न । झन विदेशमा त झन यो काम झन गाह्रो हुन्छ । झन तपाईलाई त्यहाँको भाषा राम्ररी बोल्न आउँदैन भने त झनै डरलाग्दो हुन सक्छ । सौभाग्य नै मान्नु पर्छ कि जापानी अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाहरु उच्च गुणस्तरका छन् । तपाई झन राष्ट्रिय बीमा प्रणालीमा आबद्ध हुनु हुन्छ भने त यो झनै सुपथ छ । तपाई जापानमा बस्दा बिरामी भएर अस्पताल जान नप नपरोस् तर तपाई केही गरी बिरामी हुनु भयो भने अस्पताल कसरी जाने भन्नेबारे आजको यस लेखमा बताउन गइरहेका छौं । कहाँ जाने : क्लिनिक कि अस्पताल ? जापानमा सबैतिर स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाँ एक थरी मात्रै विशेषज्ञ सेवा पाउन सकिन्छ र त्यहाँ काम गर्ने डाक्टर पनि एकजना मात्रै हुन्छन् । केही स्वास्थ्य चौकीमा भने एक भन्दा धेरै विशेष सेवा पनि पाउन सकिन्छ । जस्तैः छालासँग सम्बन्धित। हार्डजोर्नीसँग सम्बन्धित सेवा । यस्ता अधिकांश चौकीमा सबैखालका बिरामी आउन सक्छ...
2Oct By NIJ AdminNo Comments
नात्तो जापानी मौलिक खाना हो । कयौं शताब्दीदेखि अहिलेसमम पनि जापानी परिकारको हिस्सा बन्दै आएको । तर यसको लोकप्रियता अहिले सीमापार पनि फैलिएको छ । नात्तो यति धेरै लोकप्रिय हुनुको एउटा कारण हो यसको सेवनका असंख्य लाभ छन् । हाम्रो मुटु, छाला र हाडको लागि यो निकै लाभदायक छ । भटमासलाई फर्मेन्ट गरेर नात्तो बनाइन्छ । यस प्रक्रियामा भटमासहरु बसिलस सब्टिलिससँग फर्मेन्ट हुन्छ । फर्मेन्टेशन प्रक्रियाका कारण भटमास खान र पचाउन सजिलो भएको हुन्छ । एक स्रहशताब्दीभन्दा लामो समययता जापानीहरुले नात्तोलाई सुपर फूड मान्दै आएका छन् । यसको स्वाद कडा र तिखो हुन्छ अनि यसको टेक्चर पनि अनौठो छ । त्यसैले गर्दा नात्तो खान विदेशीहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ । वास्तवमा कयौं जापानीहरुले पनि यसलाई मन पराउँदैन । यद्यपि यसको स्वाद उपार्जित हो अनि यसले स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्म्क प्रभावलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने तपाईले पक्कै पनि...
12Jun By NIJ AdminNo Comments
जापानका हस्पिटलमा कुन रोगको उपचार कुन विभागमा हुन्छ ?
जापानी क्लिनिकहरु अर्थोपेडिक, सर्जरी र डम्र्याटोलोजी लगायतका विशिष्ट विभागमा विभाजित छन् । आफ्नो लक्षणअनुसार विरामीले कुुन विभागमा जाने भन्ने निर्णय विरामी आफैंले गर्नुपर्छ । प्राय हरेकको एउटा विशिष्ट उपचार विभाग हुन्छ । जापानका हस्पिटलहरुमा उपलव्ध हुने विभागहरुका बारेमा थाहा पाइराख्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो रोगको उपचार कुन विभागमा जाँदा सही ढंगले हुन्छ वा कुन हस्पिटलमा सो विभाग उपलव्ध छ सोही छानेर जान सकिन्छ । त्यसैले आजको लेखमा जापानी हस्पिटलहरुका विशिष्ट विभागबारे केही जानकारी दिने तयारी गरिएको छ । इन्टरनल मेडिशिन (Naika) यहाँ वयस्कहरुको विमारीको खोजी, रोकथाम र उपचारबारे विशिष्टता हुन्छ । यहाँ विमारीको उपचार र नियमित उपचारका लागि इण्टरनल मेडिशिनलाई प्राथमिक चिकित्सकका रुपमा लिने गरेका छन् । यहाँ अपरेशन लगायतका सेवा भने पाउन सकिँदैन । रेष्पिरेटरी मेडिशिन (Kokyuki) यहाँ आस्थमा लगायतका...
9Jun By NIJ AdminNo Comments
जापानमा पहिलो पटक गर्भवति हुने जापानी महिलाहरुका लागि पनिझन्झट हुने गरेको छ । विदेशी महिलाका नाताले केही कठिनाइहरु भोग्नु पर्छ । विशेषगरि भाषा, समय लगायतका कुराहरुले समस्या सिर्जना गर्नसक्छ । आजको लेखमा जापानमा गर्ववति भएपश्चात गर्नुपर्ने काम वा पूरा गर्नुपर्ने प्रकृयाबारे केही बताउने प्रयास गरिएको छ । १. अस्पताल भ्रमण गर्भवति भएको शुरुआती लक्षण देखिनेवित्तिकै अस्पताल गएर स्त्रि रोग विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ । गर्भ रहे नरहेको बारे घरमै जाँच गर्ने केही किटहरु उपलब्ध भएपनि ती सधैं सहि हुँदैनन् । २. गर्भवति भएको जानकारी र स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयबाट मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी एक पुस्तिका लिने जापानमा अस्पतालले तपाइ गर्भवति भएको बारे पक्का गरेपछि तपाइले स्थानीय महानगर कार्यालयमा गएर आफू गर्भवति भएको जानकारी दिनुपर्छ र त्यहाँ तपाइलाई एक मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका जारी गरिन्छ । यस...
23May By NIJ AdminNo Comments
प्राय जापानीहरु स्वास्थ्यको हेरचाहमा निकै ध्यान दिन्छन् । स्वास्थ्यबद्र्धक खानेकुरा खान्छन् । त्यसैले उनीहरुको छाला पनि निकै स्वस्थ्य र सुन्दर हुन्छ र लामो समय पनि बाँच्दछन् । आजको लेखमा जापानी परिकारमा पाइने सुन्दर छालाका लागि आवश्यक तत्वका बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । जापानी महिलाको सुन्दरताप्रति माृेहित नहुने शायदै कोही होलान् । जापानी महिलाहरु सुन्दर र जवान छालाका लागि विश्वभर प्रख्यात छन् । हुन त जोसुकैको स्वास्थ्य र छालाको उचित स्याहारका लागि खानपानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जापानी महिलाको हकमा पनि सोही कुरा लागू हुन्छ । भनाइ नै छ तपाइले खाएको चिज अनुहार र छालामा झल्किन्छ । जापानीहरु क्यालोरी बढी भएका चिल्ला पिरो खानेकुरा खाँदैनन् । उनीहरु बढी मात्रामा भिटामिन र एण्टिअक्सिडेण्ट बढी ुहुने फलफुल धेरै खान्छन् । बर्गर र पिज्जा जस्ता बढी क्यालोरी हुने खानेकुरा उनीहरु खा...